ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်း - ဘုရားသခင်ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2018-01 > ဧဝံဂေလိ
GCI / WKG ကဘာကိုယုံကြည်ပါသလဲ။
Wie bei allen doktrinären Themen, mit denen wir uns befassen, sind wir zu allererst der Wahrheit verpflichtet, die in der Heiligen Schrift offenbart wurde. Darin finden wir die Aussage, dass Gott die gesamte Menschheit in Christus mit sich versöhnt hat (2. ကောရိန္သု 5,19). Jesus lebte als Mensch mit uns, starb für uns, ist auferstanden und zum Himmel aufgefahren. Das Werk der Versöhnung vollendete Jesus, als er unmittelbar vor seinem Tode am Kreuz sprach: «Es ist vollbracht!» Aufgrund der biblischen Offenbarung wissen wir, dass was immer mit den Menschen am Ende geschieht, es nicht an Gottes Motivation, Sinn und Absicht fehlen wird. Unser dreieiniger Gott hat wirklich alles getan, um jede Person vor dem schrecklichen und entsetzlichen Zustand, der als «Hölle» bezeichnet wird, zu erretten. Der Vater gab seinen eingeborenen Sohn stellvertretend für uns hin, der seitdem als Hohepriester für uns eintritt. Der Heilige Geist arbeitet jetzt, um alle Menschen zu ziehen, damit sie Anteil an den Segnungen, die in Christus für sie bereitgehalten werden, erhalten mögen. Das ist, was wir wissen und glauben. Aber es gibt vieles, was wir nicht wissen und wir müssen vorsichtig sein, nicht Schlussfolgerungen (logische Implikationen) zu ziehen, über Dinge, die über das hinausgehen, was uns an sicherem Wissen gegeben ist.
ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသသည်အချိုးမကျပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆန့်ကျင်သောအရာမှန်သမျှကိုဘုရားသခင်တွန်းလှန်သည်။ သူကထပ်တူမပြုခဲ့လျှင်ဘုရားသခင်သည်မေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လူသားများအတွက်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့်အပြစ်ကိုဘုရားသခင်မုန်းသည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏အမျက်ဒေါသသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခုခံတွန်းလှန်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လှုံ့ဆော်သောသူ၏ကျေးဇူးတော်၌ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းအဖြစ်မယူမှတ်သင့်ပါ။ ဟုတ်ပါသည်၊ အချို့သောသူများသည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ခွင့်လွှတ်မှုပေးသောကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်အမြဲတွန်းလှန်ရန်ရွေးချယ်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်ကသူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏စိတ်ပြောင်းလဲခဲ့သောကြောင့်သူ၏စိတ်ကိုယေရှုခရစ်၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
တရားစီရင်ခံရသူကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင့်တရားစီရင်ချက်သည်ခရစ်တော်၌သန့်ရှင်းခြင်း၊ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင့်တရားစီရင်ခြင်းသည်စစ်မှန်သော၊ မှားသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆန့်ကျင်။ ဖြစ်စေ၊ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဖြစ်စေ၊ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းသဘောသဘာဝကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းစာအတွေ့အကြုံများမှမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းသောကယ်တင်ရှင်နှင့်တရားသူကြီးယေရှု၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်ဓမ္မအမှုအားဖြင့်ကျမ်းချက်များကိုဖတ်ရမည်။ ၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အောက်ပါမေးခွန်းများနှင့်သူတို့၏ရှင်းလင်းသောအဖြေများကိုစဉ်းစားပါ -
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းဘုရားသခင်မဟုတ်ကြောင်း သိ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကန့်သတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးများကိုကောင်းစွာသိပြီးခမည်းတော်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုမဖော်ပြရ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏နောက်လိုက်များနှင့်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဘ ၀ ၌၎င်းနှင့်လာမည့်နှစ်များတွင်မည်သို့ထင်ရှားမည်ကိုတိကျစွာသီအိုရီမရှိသော်လည်းသူ၏သစ္စာရှိမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်အားထားနိုင်သည်။ သေချာသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံး၌မည်သူမျှ“ ဘုရားသခင်၊ အကယ်၍ မင်းကပိုပြီးသနားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်…လူတစ်ယောက်ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်” ဟုမည်သူမျှမပြောနိုင်တော့ပါ။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်ကြွယ်ဝခြင်းထက်မကကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေ့လိမ့်မည်။
သတင်းကောင်းမှာလူသားအားလုံးအတွက်အခမဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ခံခြင်းအပေါ်လုံးဝမူတည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏လက်ခံမှုအပေါ်မူတည်သည်။ “ သခင်ဘုရား၏နာမတော်ကိုပဌနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်” ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးကိုမခံယူရန်၊ ခမည်းတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်စေလွှတ်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်အညီအသက်ရှင်ရန်မလိုပါ အပြည့်အဝခရစ်တော်၏အသက်တာ၌မျှဝေပါ။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်များအတွက် angel ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းကိုထောက်ခံရန်အကြောင်းကောင်းများစွာရှိသည် - သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှု၌လူတို့အားနောင်တတရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယေရှုကြိုဆိုပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီသည်ကိုသိရခြင်းသည်မည်မျှအံ့သြဖွယ်ပါ။